Ciidamada dowladda Suuriya oo dib ula wareegay degmada Aleppo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada dowladda Suuriya oo dib ula wareegay degmada Aleppo
Ciidamada dowladda Suuriya oo dib ula wareegay degmada Aleppo. [Sawirka: AFP]
Aleppo-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Suuriya ayaa dib ula wareegay degmada bari ee ugu weyn oo ay maamuli jireen falaagada ee Aleppo, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Ciidamada Suuriya ayaa hadda guud ahaanba gacanta ku haya degmada Aleppo, iyaga oo sifaynaya meelaha miinooyinka iyo bumbooyinka lagu qariyay, sidaa waxaa ku warantay wakaalada wararka Suuriya ee Sana.
Dowladda ayaa waday gulufka ka dhanka ah falaagada oo ay dib ugu qabsanayso Aleppo tan iyo 15-kii bishaan November.
Dad gaaraya ilaa iyo 275,000 qof ayaa ku xayiran, waxaana dagaalka ku dhintay 212 qof oo shacab ah, sida ay sheegeen guddiga kormeerida xuquuqda aadanaha Suuriya oo fadhigoodu yahay dalka UK.
Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 12 caruur ah, sida ay sheegeen guddiga, warbixinada ayaa muujinaya in ay jiraan la’aanshaha daawooyinka caafimaad iyo cuno.
Qabsashada Aleppo ayaa guul u noqonaysa madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad kadib lix sanno iyo bar colaad ah.
Aleppo, ayaa mar ahaan jirtay xarunta ganacsiga iyo warshadaha ee Suuriya, waxayna u qaybsanayd labo qeybood tan iyo 2012-kii, iyadoo qeybta galbeed ay maamuli jirtay dowladda qeybta barina falaagada.
August 29, 2016 Ugu yaraan 45 qof oo ku dhimatay weerar isbiimayn ah oo ka dhacay dalka Yemen oo ay masuuliyadiisa sheegatay ISIS
January 3, 2017 Ugu yaraan 19 qof oo ku geeriyooday dagaal cusub oo ka dhacay dalka Yeman oo u dhaxeeya falaagada Xuutiyiinta iyo xoogaga taabacsan dowladda
Geerida Fidel Castro: Itoobiyaanka oo ku tilmaamay saaxiib halyay ahaa, Soomaalida oo ugu ciilqabta dagaalkii Ogaadeeniya ee 1977
Garoowe-(Puntland Mirror) Qaybo kamid ah gobolada Puntland ayaa helay roobab fiican kadib abaar daran oo jirtay muddo toban bilood ka badan. Gobolada sida Nugaal, Mudug, Karkaar iyo Sool ayaa helay roobab fiican, sida ay sheegeen dadka [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Cabdullaahi Shire Dool u magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada booliiska, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday maanta oo Khamiis ah. Digreetada, ayaa Madaxweyne Cabdiweli sidoo kale [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland maritime police forces (PMPF) on Thursday apprehended four illegal fishing boats belonging to Yemeni fishers, according to sources. The PMPF caught the boats and crew members after they launched an operation against [...]